Burma Partnership » Civil Society Calls on UN Human Rights Council to Address Serious Human Rights Challenges in Burma/Myanmar
By Burma Partnership • March 2, 2013
Civil society organizations from Burma/Myanmar are urging the United Nations Human Rights Council 22nd session to address the serious human rights violations that are challenging the country’s reform process.
Today, 22 organizations releasedastatement outlining ongoing human rights violations, including sexual violence, torture, arbitrary arrest and extrajudicial killings, and discrimination against ethnic and religious minorities. The statement urges the Council to maintain its resolution on the situation of human rights in Burma/Myanmar under item4as “Human rights situations that require the Council’s attention” rather than lowering it to item 10, which would reduce the mandate of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Burma/Myanmar from monitoring to that of technical assistance.
A delegation from Burma/Myanmar is in Geneva to raise these concerns directly with Asian, European and US missions, United Nations agencies and Special Rapporteurs. The delegation is comprised of Htay Kywe,aleader of the 88 Generation Student Group, Jessica Nkhum from the Kachin Women’s Association Thailand and Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership.
“In the last6months, we have documented 26 cases of civilians being killed in Burma Army artillery attacks on civilian areas in Hpakant, Pangwa, Laiza, Maijayang, and near Myitkyina,” said Jessica Nkhum. “Despite ceasefire talks, the army continues to deliberately target civilian settlements, destroying villages and shelters for internally displaced persons, and firing shells and mortars at unarmed men, women and children. We urgently need the international community to help stop these attacks and protect the people of Kachin State.”
“These ongoing human rights violations poseaserious threat to our country’s reform process,” said Khin Ohmar. “Without an independent and impartial justice system and laws that protect citizens’ fundamental human rights, the Human Rights Council’s attention on these violations is crucial to ensure that the government continues to make reforms in the right direction. Our country absolutely needsastrong Council resolution and the continued full mandate of the Special Rapporteur.”
“In order for our country to become truly democratic, it is essential that people in Myanmar can fully and safely exercise their freedom of expression, assembly and association. We need the Human Rights Council and the Special Rapporteur to continue to encourage the Myanmar government to carry out systematic reforms to establish the rule of law. The government must develop an independent and impartial justice system, implement good governance practices, guarantee inclusive and safe participation of all in the reform process and release all remaining political prisoners,” said Htay Kywe,aformer political prisoner.
The delegation will be participating in the following public events in Geneva:
The Future of Burma/Myanmar’s Spring
Café des Savoises de la Maison des Associations
Organized by Association Suisse Birmanie. The event will be an occasion to analyze Burma/Myanmar’s reform process in light of the current situation for ethnic nationalities and religious minorities in the country.
Burma/Myanmar: Reforms Must Not Overshadow Serious Human Rights Abuses
Monday 11 March at 3pm
Organized by Forum Asia, Human Rights Watch and the International Federation for Human Rights (FIDH). Mr. Tomás Ojea Quintana, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Burma/Myanmar will join the event after presenting his report to the Council earlier that day. Read more about the event here.
For more information, please contact the delegation at +447509692790 or +66818840772.
Read the statement in Burmese and English here.
မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ ဆိုးရွားလှသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအား လူထုအသိုင်းအဝိုင်းမှတောင်းဆို
မြန်မာပြည်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်ကို စိန်ခေါ်နေသော ဆိုးရွားလှသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၂၂) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန် မြန်မာ့လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ၊ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုများ၊ ဥပဒေပြင်ပ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု သို့မဟုတ် ဘာသာရေးလူနည်းစုများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ အပါအဝင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ထောက်ပြထားသော သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစောင်ကို အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၂ ဖွဲ့မှ ယနေ့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများအပေါ် ချမှတ်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို “ကောင်စီ၏ အလေးထားမှု ဆက်လက်လိုအပ်သော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ် (၄) အောက်တွင်သာ ဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို “စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း” မှ “နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်း” သို့ လျော့နည်းသွားစေမည့် ခေါင်းစဉ် (၁၀) အောက်သို့ ရွေ့ပြောင်းခြင်းမပြုရန် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲတွင် တောင်းဆိုထားသည်။
အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အာရှ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်များထံ တင်ပြနိုင်ရန် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဂျနီဗာမြို့တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး – ထိုင်းနိုင်ငံမှ Jessica Nkhum နှင့် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ တာဝန်ခံ မခင်ဥမ္မာတို့ ပါဝင်ကြသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်းမှာ ဖားကန့်၊ ပန်ဝါ၊ လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန်နှင့် မြစ်ကြီးနားအနီးတဝိုက် လူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကို မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ပြည်သူလူထုသေဆုံးသွားတဲ့ အမှု ၂၆ ခုကို ကျမတို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်” ဟု Jessica Nkhum မှပြောသည်။ “အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပေမယ့် စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူလူထုတွေအခြေချတဲ့နေရာတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဆက်ပြီး ပစ်မှတ်ထားနေတုန်းပါပဲ။ ရွာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့စွန့်ခွာထက်ပြေးသူတွေ ခိုလှုံရာနေရာတွေကို ဖျက်ဆီးတာ လက်နက်မဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေကို ဗုံးတွေ အမြှောက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေ ဆက်လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ကချင်ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အကူအညီကို ကျမတို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။”
“ဒီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ် ကို တော်တော်လေး ခြိမ်းခြောက်နေ ပါတယ်” ဟု မခင်ဥမ္မာမှ ပြောသည်။ “ခုလို ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး တွေကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့တရားရေးစနစ် မရှိသေးချိန်မှာ အစိုးရဘက်ကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့က ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့အလေးထားမှု ဆက်ပြီးရှိနေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကောင်စီရဲ့ အားကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ဖို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝ သတ်တမ်းတိုးပေးဖို့ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက် လုံးဝကိုလိုအပ်နေပါတယ်။”
“ကျတော်တို့တိုင်းပြည် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ပြည်သူတွေဟာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် စုဝေးခွင့်နဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို လုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ အပြည့်အဝ ကျင့်သုံးနိုင်ရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တည်ထောင်သွားဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ ဆက်လက် အားပေးတိုက်တွန်းမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရက စစ်မှန်ပြီးအမှီအခိုကင်းတဲ့ တရားရေးစနစ်ကို တည်ထောင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရကျင့်စဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမယ်။ အများပါဝင်မှုရှိပြီးလုံခြုံမှုရှိတဲ့ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်အတွက် အာမခံချက်ပေးပြီး ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလဲ လွှတ်ပေးရပါမယ်” ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဌေးကြွယ်မှပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အောက်ပါ အစီအစဉ်များသို့ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၈ ရက် ညနေ ၇း၀၀ နာရီ (သောကြာနေ့)
Association Suisse Birmanie မှစီစဉ်ကျင်းပသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်ကို လက်ရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် ဘာသာရေးလူနည်းစုများ ကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေ ရှုထောင့်မှ သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“မြန်မာ – ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ဆိုးရွားသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအကြောင်းကို မမှေးမှိန်စေနှင့်”
မတ်လ ၁၁ ရက် ညနေ ၃း၀၀ နာရီ (တနင်္လာနေ့)
Forum-Asia, Human Rights Watch နှင့် International Federation for Human Rights တို့မှ စီစဉ်ကျင်းပသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ်ကွင်တားနားမှ ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းနောက် ထိုနေ့တွင် တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ရန် – +၄၄၇၅၀၉၆၉၂၇၉၀၊ +၆၆၈၁၈၈၄၀၇၇၂
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Tags: Armed Conflict, Burma Partnership, Burmese, Htay Kywe, Kachin State, Special Rapporteur, United Nations Human Rights Council